Miverina ihany koa i Motorola ary manainga sary famantarana vaovao | Vaovao momba ny gadget
Miverina ihany koa i Motorola ary manaova sary famantarana vaovao
Motorola izy na ny marimarina kokoa dia iray amin'ireo orinasa manana lanjany lehibe indrindra amin'ny tsenan'ny telefaona finday. Fotoana vitsy lasa izay dia nanapa-kevitra i Lenovo fa hividy azy io ary handray azy io, ary hidina amin'ny tantara izany. Na izany aza, ity fanapahan-kevitra hamoaka terminal ity miaraka amin'ny teny filamatra "Moto by Lenovo" dia toa tantara ary niverina i Motorola, namoaka fango vaovao ihany koa, miaraka amin'ny hevitra hanarenana ny fotoana very sy ny toerany eo amin'ny tsena.
Tamin'ny taona 2016 rehefa nanapa-kevitra ny hisitraka tanteraka ilay orinasa i Lenovo, taorian'ny fihazonany azy velona sy tsy miankina nanomboka ny taona 2014, izay ny taona nividianany azy tamin'ny Google izay nahavitany niverina tamin'ny pejy voalohany. Toa tonga izao ny fotoana hiverenana amin'ny lasa sy hanafoanana ny fanapahan-kevitra noraisina.
Amin'izao fotoana izao kely ny fantatra momba ny fiverenan'i Motorola teny an-tsena, na dia efa voamarina aza fa hamoaka sary vaovao sy vaovao kokoa izy ireo izay milaza mazava fa niverina ilay Motorola angano, ary ny fiverenana dia hidika ihany koa, ahoana no fomba hafa, ny fananganana fitaovana finday vaovao any amin'ny tsena.
Ny tsaho amin'izao fotoana izao dia milaza fa afaka mahita a Motorola Moto X sy Motorola Moto Z, fa koa afaka manomboka tsy ho ela isika mahita ny fomba hanombohan'ny Moto G manararaotra an'io toe-javatra vaovao io.
Nanao hadisoana mazava i Lenovo tamin'ny "famonoana" ny marika Motorola, saingy toa nahavita nanitsy ny hadisoany ara-potoana izy io ary izany dia tsy misy na inona na inona mivarotra terminal be eny an-tsena noho ny fananana orinasa malaza ao ambadik'izany.
Mihevitra ve ianao fa marina ny Lenovo amin'ny famerenany ny marika Motorola ary manome azy logo vaovao sy lanja lehibe eo amin'ny tsena?.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Miverina ihany koa i Motorola ary manaova sary famantarana vaovao
Hevitra tsara raha manandrana mamerina manangana orinasa ianao: ovao ny sary.
Motorola dia marika tsara hatrizay nefa tamin'izany dia tsy afaka nifanaraka tamin'ny hafainganam-pandeha haingana izay mandroso ny tontolon'ny teknolojia ary mieritreritra aho fa raha apetrak'izy ireo ny bateria dia mety hahazo vokatra tsara izy ireo.
Izahay dia mamakafaka ny cam cam dash CACAGOO, fitaovana tsara ho an'ny fiaranao
Ireo no premieres ao amin'ny Netflix, HBO ary Movistar + amin'ny volana aprily 2017